Ntuziaka doro anya na WhatsApp Web iji nweta ọtụtụ ihe na ya | Nzukọ Ekwentị
Ụlọ Ignatius | | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, WhatsApp
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ekwentị mkpanaaka abụrụla ihe eji eme ihe n’afọ ndị a eme ihe ọ bụlaSite na foto, na ilele ihe ndekọ ego ụlọ akụ anyị, na izipu ozi ịntanetị, akwụkwọ mbipụta, ndekọ na ịdezi vidiyo ... Ihe ọ bụla batara anyị n'uche, anyị nwere ike iji ekwentị mkpanaaka mee ya.
Otú ọ dị, mgbe a na ngwaọrụ ọ dịghị mma iji soro ya rụọ ọrụ ụbọchị niile dị ka naanị ngwaọrụ, ihe nwere ike ịbụ mbadamba tumadi n'ihi nsogbu nsogbu na n'ihi na anyị nwere ike itinye mpụga kiiboodu iji dee ngwa ngwa na ngwa ngwa ma si otú ahụ zere na ọkara ihuenyo ahụ abaghị uru site na keyboard ahụ.
Ọ bụrụ na anyị etinye ọtụtụ awa n'ihu kọmputa, mgbe niile ịkpọtụrụ anyị ama gụọ ma zaghachi ozi WhatsApp Anyị na-enweta nnukwu arụpụta ọrụ, arụpụta nke anyị nwere ike melite ma ọ bụrụ na anyị ejiri WhatsApp Web, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ akaụntụ azụmahịa, ebe ọ bụ na ọ ka mma iji zaghachi na keyboard nkịtị karịa site na ekwentị.
1 Gịnị bụ WhatsApp Web
2 Kedu ihe koodu QR na gịnị ka ha bụ maka na webụsaịtị WhatsApp
3 Etu ị ga-esi banye na WhatsApp Web
3.1 Nweta WhatsApp Web site na iPhone
3.2 Nweta WhatsApp Web site na gam akporo
4 Kedu ihe anyị nwere ike ime na WhatsApp Web
4.1 Gbanwee profaịlụ gị na ọkwa anyị
4.2 Mepụta otu
4.3 Na-ehichapụ ma hichapụ chats
4.4 Zipu faịlụ ọdịyo
4.5 Zipu emoticons na kaomojis
4.6 Zipu foto na vidiyo
4.7 Kekọrịta foto na kamera anyị
4.8 Ziga akwụkwọ na kọntaktị
4.9 Nweta ozi kọntaktị
4.10 Zaghachi, chere ihu, kpakpando ma hichapụ ozi
5 Esi rụọ ọrụ ọchịchịrị na WhatsApp Web
6 Etu esi akpọ oku vidiyo na WhatsApp Web
7 Etu esi eme oku oku na WhatsApp Web
8 Mechie oge niile iji gbochie ha inyocha anyị
Gịnị bụ WhatsApp Web
WhatsApp Web bụ ọrụ, ọ bụghị ngwa, nke ahụ WhatsApp na-enye ndị ọrụ niile ohere nke ikpo okwu ozi a iji nwee ike ijikwa ozi site na kọmputa, ma ọ bụ site na mbadamba. WhatsApp anaghị echekwa ozi anyị na sava ya, yabụ otu ụzọ isi nye ọrụ a dabere na ama.
Site na ịdabere na ekwentị anyị, nke a kwesịrị ịdị na mgbe niileEbe ọ bụ na a na-edozi ozi anyị na-eziga ma nata site na WhatsApp Web site na ama anyị, ya mere ọ dị mkpa na smartphone ebe anyị nwere akaụntụ WhatsApp na-arụ ọrụ mgbe niile.
Kedu ihe koodu QR na gịnị ka ha bụ maka na webụsaịtị WhatsApp
WhatsApp na-eji koodu QR eme ihe cazụ nchọpụta pụrụ iche na ibe weebụ WhatsApp iji mekọrịta mkparịta ụka niile nke onye ahịa anyị na-arụ ọrụ na nsụgharị weebụ, kama ịtụgharị uche, ebe ọ bụ na dịka m kwuru na ngalaba gara aga, WhatsApp Web bụ ngosipụta nke ngwa mkpanaka anyị.
Etu ị ga-esi banye na WhatsApp Web
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ nweta web.whatsapp.com site na kọmputa ma ọ bụ na mbadamba. Ọ bụrụ na ọ bụ mbadamba, anyị ga-arịọ ka ihe nchọgharị ahụ buru ụdị desktọọpụ, ọ bụghị maka ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ bụghị QR koodu anyị chọrọ agaghị apụta.
Nweta WhatsApp Web site na iPhone
Ozugbo anyị meghere ngwa ahụ, anyị ga-enweta nhọrọ ahụ Mbido nke dị n'akụkụ aka nri ala.
Na-esote, pịa na Nyochaa koodu QR.
N'oge ahụ, anyị nwere ịchọta na igwefoto nke anyị ama nal QR koodu gosipụtara na ihuenyo nke kọmputa anyị ma ọ bụ na mbadamba.
Nweta WhatsApp Web site na gam akporo
Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, pịa na isi ihe atọ nke dị n'elu aka nri nke ngwa ahụ wee họrọ WhatsApp Web
Ọzọ, anyị na-eduzi ekwentị na ihuenyo nke kọmputa anyị ma ọ bụ mbadamba nkume ebe E gosipụtara koodu QR.
Kedu ihe anyị nwere ike ime na WhatsApp Web
Ebe ọ bụ na WhatsApp kwalitere ụdị mbụ nke WhatsApp maka ihe nchọgharị, naỌrụ a agbanweela ọtụtụ ma taa ọ na-enye anyị ihe dịka ọrụ anyị nwere ike ịchọta na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka.
Gbanwee profaịlụ gị na ọkwa anyị
Site na ihe nchọgharị anyị na ekele WhatsApp Web anyị nwere ike gbanwee profaịlụ anyị, maka ihe oyiyi ọ bụla anyị dowere na kọmputa anyị, dị ka ọnọdụ anyị, ọ bụrụ na anyị bụ otu n’ime ndị na-agbanwe ya mgbe niile iji gwa ndị enyi ha niile ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ na anyị agaghị akpọtụrụ ya n’oge ụfọdụ.
Jikwaa ma mepụta otu anyị Ọ dịbeghị ka ọ dị mfe dịka ọ dị na WhatsApp Web, ebe ọ na-enye anyị ohere ijikwa ikikere jikwaa ikikere, tinye ma ọ bụ dochie onyonyo profaịlụ, kesaa onyonyo ma ọ bụ vidiyo ... Otu ọrụ ndị anyị nwere na anyị nwere na WhatsApp maka ekwentị mkpanaaka mgbe ijikwa ma mepụta otu, anyị na-ahụ ha na ụdị weebụ.
Na-ehichapụ ma hichapụ chats
Imirikiti otu ndị anyị hụrụ onwe anyị na-emechi ọnụ ma anyị ekwenye naanị mgbe mmadụ kwuru banyere anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nwere mkpa iji ya. Site na nsụgharị weebụ nke WhatsApp, anyị nwekwara ike ogbi na ọbụna ihichapụ chats.
Zipu faịlụ ọdịyo
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ n'anya nke ọdịyo na WhatsAppSite na ntanetị weebụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-eme nke ahụ n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị ị hụrụ n'anya kpọrọ ha asị nke ukwuu ma ghara ị attentiona ntị. Oge izizi ị mere ya, ihe nchọgharị ahụ ga-arịọ maka ikike gị ka WhatsApp Web wee nwee ike banye igwe okwu iji zipu igwe okwu.
Zipu emoticons na kaomojis
Emoticons enweghị ike ịpụ na WhatsApp. Na ụzọ ala, anyị nwere otu akara ngosi dị ka n'ụdị mkpanaka, mana anyị nwekwara ike jiri Koamoji, ekele maka ọrụ akara ndị anyị nwere n'aka anyị site na iwu Windows Key +. (isi).
Zipu foto na vidiyo
Ihe onyonyo ọ bụla anyị debere na kọmputa anyị, anyị nwere ike ịkekọrịta ya site na WhatsApp, ọ bụ ezie na ọ dị mwute ikwu na anyị na-aga ịchọta onwe anyị na otu oge ókè na anyị na-ahụ na mobile version.
Kekọrịta foto na kamera anyị
Ọ bụrụ na ndị otu anyị nwere kamera kamera, anyị nwere ike zipu onyonyo nke anyị site na nsụgharị weebụ nke WhatsApp, agbanyeghị, anyị enweghị ike iji otu igwefoto a mee oku vidiyo kpọmkwem site na WhatsApp (ọ bụ ezie na ha na-arụ ọrụ na ya) dịka anyị kọwara na ngalaba na-esote.
Ziga akwụkwọ na kọntaktị
Webdị ntanetị nke WhatsApp dị mma maka izipu faịlụ, ọ bụ ezie na anyị na-ahụ Nchịkọta 100MB mgbe ọ na-abịa n'ịkesa ha, njedebe nke ruru 1.5 GB n'ihe banyere Telegram.
Nweta ozi kọntaktị
WhatsApp Web na-enyekwa anyị ohere nweta ozi kọntaktị nke mkparịta ụka anyị, ma ọ bụ nkeonwe ma ọ bụ otu. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ihichapụ ozi sitere na nkata nzuzo na nke otu, na-eburu n'uche mgbe niile na, mgbe obere oge gachara, a ga-ehichapụ ozi ahụ na nkata anyị, ọ bụghị site na onye nnata.
Zaghachi, chere ihu, kpakpando ma hichapụ ozi
Ọbụghị nke kachasị mkpa, anyị ahapụla ya ọrụ doro anya nke na-enye anyị ohere ịme ụdị ntanetị nke WhatsApp, dị ka ịzaghachi ozi, zipu ha, igosipụta ha n'otu ìgwè ma ọ bụ ihichapụ ozi.
WhatsApp bụ otu n'ime ndị mmepe ikpeazụ na ofree ọchịchịrị mode na ngwa gị maka ekwentị mkpanaaka. N'ụzọ doro anya, anyị enweghị ike ịtụ anya na WhatsApp n'onwe ya ga-enye nsogbu iji nye ọnọdụ gbara ọchịchịrị maka ụdị web (anyị nwere ike ichere ịnọdụ ala, ọ bụghị ịgha ụgha).
Ọ dabara nke ọma, iji zere inwe mgbakwunye atụmatụ a, ụdị weebụ nke WhatsApp akwado ọchịchịrị mode nke ihe nchọgharị nke nwere ọrụ a, yabụ anyị ga-arụ ọrụ ya na kọmputa anyị ma ọ bụ ihe nchọgharị ka ọ rụọ ọrụ na akpaghị aka na ntanetị weebụ.
Iji kpọọ oku vidiyo site na WhatsApp Web, anyị ga-ebudata ngwa ozi, ngwa nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya na nke dị maka Windows na MacOS kpamkpam n'efu, ma ọ bụ gịJiri ihe nchọgharị Google Chrome ma ọ bụ Microsoft Edge Chromium.
Imepụta a oku vidiyo site na WhatsApp Web, anyị ga-agbaso usoro ndị m gosipụtara gị n'okpuru:
Pịa na clip dị n'aka nri nke akara ngosi bọtịnụ ma họrọ nhọrọ sala (nke igwefoto nọchiri anya ya).
Ọzọ, ọ na-agwa anyị ka anyị jiri Messenger kee ya, pịa Gaa Ozi.
N'oge ahụ, na-eji Chrome ma ọ bụ Microsoft Edge Chromium mgbe niile, anyị ga-eji ya tinye data nke akaụntụ Facebook ma ọ bụ ozi anyị.
Na-esote, pịa na Mepụta ime ụlọ, ime ụlọ nke ndị niile anyị na-akpọ nwere ike isonyere na njedebe nke mmadụ 50 na-enweghị inwe akaụntụ na Facebook ma ọ bụ ozi.
N'ikpeazụ, ka na-egbu maramara Banye n'ọnụ ụlọ ahụ ebe ndị anyị na ha ga-eso ga-esonye na njikọ a ga-egosi mgbe ha batara n’ime ụlọ ahụ.
Njikọ ahụ, anyị kwesịrị kọọrọ ya onye ọ bụla anyị chọrọ ka ha sonyere na ogbako vidiyo.
Etu esi eme oku oku na WhatsApp Web
O di nwute ọ gaghị ekwe omume ịkpọ oku ọnụnụ Site na WhatsApp, arụmọrụ nke na-ekwesịghị iwe ogologo oge iji rute ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na WhatsApp na-anwale ule ọhụrụ nke ga-ekwe ka oku vidiyo si na ihe nchọgharị ahụ.
Mechie oge niile iji gbochie ha inyocha anyị
Mgbe anyị kwụsịrị iji WhatsApp na kọmputa ma anyị enweghị atụmatụ iji ya ọzọ, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ mechie oge niile nke anyị kwubiri na mbụ, n'ụzọ dị otú a, mechie ohere ọ bụla na-enweghị ikike na akaụntụ WhatsApp anyị, site n'aka onye nwere ohere ịnweta mkpanaka anyị na-enweghị anyị amataghị.
Iji mechie nnọkọ niile ma ọ bụ naanị nke ụfọdụ ngwaọrụ, anyị ga-abanye na ngalaba Weebụ WhatsApp na ebe ọ na-egosi Sessions, hichapụ ndị niile anyị agaghị eji ọzọ. Ọ bụrụ na anyị nwere obi abụọ Banyere ndị otu ọ na-ezo aka, ihe kachasị mma anyị nwere ike ime bụ iwepụ ha niile.
Dị ka m kwurula ọtụtụ ugboro n'isiokwu a, WhatsApp Web abụghị ihe ọ bụla karịa enyo nke ihe niile na-eme na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka anyị, yabụ mgbanwe ọ bụla anyị mere, na-egosipụta ozugbo na ekwentị anyị enweghị ike iwepụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Ntuziaka doro anya na WhatsApp Web iji nweta ọtụtụ ihe na ya
Ebe ibudata akwụkwọ ọdịyo n'ịntanetị n'efu na Spanish
Etu esi ebudata akụkọ Instagram ngwa ngwa na mfe